Best iPad ka Mac Nyefee Software maka Mac OS X Mountain Odum
> Resource> Mac> Best iPad ka Mac Nyefee maka MacBook Pro / MacBook Air / iMac
"My ọhụrụ iMac dị nnọọ rutere. Ugbu a, m mkpa ịkwaga ihe niile si ochie PC ka iMac. Otú ọ dị, o yiri na m iTunes akaụntụ, m nwere ike na nyefee zụrụ ihe ndị ọhụrụ iTunes Library. Olee banyere ndị a songs na vidiyo m na jidere si isi mmalite ndị ọzọ? Ugbu a, ha niile bụ na m iPad. Bụ n'ebe ọ bụla iPad ka Mac transfer software ka m nyefee faịlụ site na iPad ka Mac? "
Dị ka iPad ọrụ n'elu, ị na-achọ ihe iPad ka Mac transfer ngwá ọrụ nyefee faịlụ site na iPad ọhụrụ Mac kọmputa maka ndabere? Na nke a, ga-amasị m ka nwere ike ikwu ihe kasị mma iPad ka Mac transfer ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-ahapụ ị nyefee music, foto, na vidiyo si na iPad ka Mac ọsọ ọsọ na mfe.
Gbalịa iPad ka Mac transfer software ugbu a!
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere a Windows PC na chọrọ nyefee faịlụ site na iPad ka Windows PC, biko gbalịa Wondershare TunesGo (Windows).
Key atụmatụ nke iPad ka Mac transfer software
Nyefee music si iPad ka iTunes amamihe. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ songs on iPad na-adịghị adị na iTunes Library na gị Mac, ị nwere ike họrọ nyefee ndị a niile songs ma ọ bụ họrọ ndị iTunes Library na a mfe click. Gịnị bụ ihe ịtụnanya bụ na ọ dịghị oyiri song ga-apụta. Nke a iPad ka Mac ngwa ga iyo ndị a duplicated songs-akpaghị aka.
Ndabere foto site na iPad ka Mac. Photos iwere na iPad na igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library nwere ike zigara Mac maka inwekwu edezi ma ọ bụ ndabere.
Nyefee vidiyo si na iPad ka Mac. Videos na ị na e dere ya na iPad ma ọ bụ ibudatara na Ịntanetị na iPad nwere ike ịbụ niile kpọfere Mac compute maka nkwado ndabere na mpaghara dị ka mma.
Usoro chọrọ & akwado iPad ụdị
Akwado Mac OS: Mac OS X 10.7, 10.6, 10,8 na 10.9 (Mavericks)
Akwado iOS: iOS 5, iOS 6 & iOS 7
Akwado iPad ụdị: iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The New iPad, iPad 2, iPad
Olee otú iji iPad ka Mac Nyefee ngwá ọrụ
Ọ bụrụ na gị iPad na-agba na iOS 10.5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ iOS 9 ị Mac kọmputa dabeere Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, 10,9, 10.10 ma ọ bụ 10,11 mgbe ahụ ị ga-agafeta faịlụ site na iPad ka Mac ọma. Soro nzọụkwụ n'okpuru ịkwaga faịlụ site na iPad ka (ọhụrụ) Mac.
Jikọọ iPad na Mac site eriri USB na ẹkedori iPad ka Mac transfer ngwá ọrụ. iPad ka Mac transfer ngwa ga-chọpụta gị iPad-akpaghị aka.
Họrọ faịlụ, gụnyere songs, videos, ma ọ bụ foto, pịa Export.
Wondershare TunesGo (Mac), ugbu a, bụ ihe kasị mma iPad ka Mac transfer ngwá ọrụ nyefee music, videos na foto site na iPad ka Mac kọmputa. E wezụga na, ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee faịlụ site na Mac ka iPad enweghị erasing faịlụ na iPad, ọ na-enyere dị ka mma.
Gbalịa iPad ka Mac transfer ngwa ugbu a!
Adobe Flash Professional CS5.5 maka Mac